Puntland oo DF kala hadashay xildhibaano kasoo jeeda oo lagu dilay Muqdisho – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Puntland oo DF kala hadashay xildhibaano kasoo jeeda oo lagu dilay Muqdisho
26th July 2014 A warsame Af Soomaali 0
Mareeg.com: Madaxwaynaha iyo Ra’iisul wasaraha Soomaaliya ayaa xalay madaxtooyada ku qaabilay wafdi iskugu jira wasiiro iyo odayaal dhaqan oo Puntland ka socda si ay uga qayb gallaan Aaska Xildhibaan Saado Cali Warsame balse ka dib dhacay.
Kulankan ayay wafdiga Puntland ka socda madaxda DF ugu soo jeediyeen inay baaritaan ku sameeyaan dilka Xildhibaan Saado Cali Warsame oo sidoo kale ahayd fanaanad qaran.
Wasiirka wafaafinta dowladda Puntland oo saxafadda Muqdisho la hadlay ayaa sheegay madaxda Villa Somalia joogta inay kala hadleen baaritaan deg deg ah oo lagu sameeyo saddex xildhibaan oo deegan ahaan Puntand kasoo jeeda oo Muqdisho lagu dilay sanadkan.
Cabdiwali Xisri Indhoguran ayaa sheegay madaxwaynaha DF Xasan Shiikh Maxamuud inuu ka balan qaaday in loo howlgali doono sidii gacanta loogu soo dhigi lahaa si cadaalada lasoo hor istaajiyo dadkaasi wax ku oolka beegsanay.
“Madaxweynaha waxaan kala hadalnay in baaris dhab ah lagu sameeyo dilkii Rabbi ha-u-naxariisteee, Saado Cali, Xasan Sheekhna wuxuu noo ballan-qaaday inay ku sameyn doonaan dilkaas baaris adag,” ayuu yiri wasiirka warfaafinta Puntland, C/weli Xirsi Cabdulle (Garaase) oo kulanka kaddib la hadlay warbaahinta.
Sidoo kale, wasiirka ayaa sheegay in sidoo kale madaxweynaha ay kala hadleen dil labo xildhibaan oo kasoo jeeda degaannada Puntland loogu geystay Muqdisho, kuwaaas oo kala ahaa sida uu sheegay; xildhibaan Maxamed Maxamuud Xeyd iyo Xildhibaan Feysal.
Madaxweyne Xasan oo magacaabay Xeer Ilaaliyaha guud ee qaranka
Dagaal beeleed ka dhacay deegaanka Lambar 50 ee Shabeellaha Hoose